Ka qeybqaado gurmadka Doolow ee soomaalida Norway. - NorSom News
Ka qeybqaado gurmadka Doolow ee soomaalida Norway.
Jaaliyada soomaaliyeed ee dalkan Norway iyo gudiga gurmadka musoobooyinka, ayaa maalmo kahor bilaabay gurmad balaaran oo loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee dhibaatada xoogan ay kasoo gaartay fatahaada wabiga ee degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Gudiga gurmadka Doolow ayaa fadliga bisha Ramadaan ee hada sii dhamaaneyso, soomaalida Norway ugu baaqayo inay ka qeybqaataan gurmadka walaalaha soomaaliyeed ee magaaladaas ku dhibaaeteysan. Waxaana wixii macluumaad ah ee xiriirka gudiga gurmadka ku saabsan aad ka akhrin kartaa sawirka kore.
Previous articleDhageysiga maxkamada khilaafka maamulka Towfiiq oo isbuuca danbe dhici doonto.
Next articleWadan xuduudkiisa u furi doono Norwiijiyaanka fasax doonka ah.